Version 0.3.6 – I baadh haddii aad awoodid
December 2, 2009 by dalabyo Leave a Comment
Version Tani waxay muuqaal aad u fiican, taas oo aanu rajaynaynaa in jagooyinka si ka wanaagsan marka loo eego xal kale. Tani waa awooda in ay sameeyaan baaritaan afka turjumay bogagga turjumay. Haddaba sidaas daraaddeed content laguu turjumo ka badan la heli karaa si ay u isticmaala aad noqonayaa.
Waxa kale oo aanu isu baddashay RSS ka cunaa taageero version this, iyo hadda xidha in RSS si fiican u xiri afka saxda ah. Waxaan jeclaan lahaa inaan u mahadceliyo datapharmer uu gargaar taa. Waxa kale oo aanu jeclaan lahaa in la ogaado, waayo, dhammaan dadka isticmaala weydiistay google sitemaps-dhexgalka, Feeds RSS in meel wanaagsan oo loogu talagalay sitemaps on goobta Google, si aad ku dari kartaa rss cusub Lamase comment Lamase google aragti fiican in laga yaabo.
Dhalato yar Last, hadda waxaan sidoo kale turjumi soo gudbiyaan badhamada nooca (wanaagsan foomka raadinta).
Waxaan rajaynaynaa inaad doontaa raaxaysan version this – Hadii wax la jebiyey, halkan oo keliya comment, iyo fadlan – isticmaali mail aan jawaabi kartaa in, haddii kale aan awoodin in ay dib u helaan in aad, taas oo ceeb…
Fikradaha, cayayaanka, oo ammaan ku yihiin had iyo jeer soo dhaweeyay.
Filed Under: Shaaciyaan Release Tagged Iyadoo: yaryar, sii daayo, search, plugin wordpress